दशलाख बालबालिका राज्यविहिन हुने |
दशलाख बालबालिका राज्यविहिन हुने
प्रकाशित मिति :2015-07-26 12:08:43
मस्यौदा संविधानको नागरिकता व्यवस्थामा परिमार्जन नगर्ने हो भने करिव १० लाख बालबालिका राज्यविहिन हुनेछन्। यस मध्ये करिव ९ लाख बालबालिका एकल आमासँग बस्दै आएका छन्।
काठमाडौंका अनिल रायमाझीले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्दा आत्महत्याको प्रयास गरे। आमा बाबु नभएका रायमाझी धरानबाट ३० वर्ष अघि काठमाडौं आएका थिए। यहिँ विहे गरे। उनकी श्रीमतीको नागरिकता छ तर, अनिलको छैन। आफ्ना २२ वर्षका छोरा र १८ वर्षकी छोरीलाई आमा कै नाममा नागरिकता देऊ भन्दै शिफारिसका लागि सैयौं पटक उनी वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए तर, नागकिता त के सिफारिससम्म पनि पाउन सकेनन्।
‘तपाई हुँदाहुँदै किन श्रीमतीको नाममा नागरिकता दिने ? कि तपाईं मर्नुपर्‍यो कि वेपत्ता हुनपर्‍यो।’ अनिल भन्छन्, ‘म मरेर छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन् भने मरिदिन्छु भनेर लामखुट्टे मार्ने औषधी खाइदिएँ, तर मरिन।’ छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्दा साह्रै हतोत्साही भएका अनिललाई झन ठुलो चोट पर्‍यो जव उनकी छोरीले समेत आत्महत्याको प्रयास गरिन्। अनिल भन्छन्, ‘म जिल्लातिर थिएँ छोरीले यहा बिष खाइछन्। किन यसो गरेको भन्दा त तिमीहरू कस्तो बावुआमा एउटा नागरिकता पनि दिन नसक्ने भनिन्।’
दाङकी मीना बादीका छोरा १२ मा पढ्दैछन्। उनी आमासँग नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रसाशन कार्यालय गए, तर, नागकितामा ‘बाबु पत्ता नलागेको’ भनेर लेख्नुपर्छ भनेपछि उनी नागरिकता लिन मानेनन्। आमा मीनाले भनिन् ‘बाबु पत्ता नलागेको लेख्नुपर्छ भनेपछि छोरो रोयो नागरिकता लिन मानेन।’ मीनाका श्रीमान् अहिले जेठी श्रीमतीसँग बस्छन्। मीना भन्छिन्, ‘छोरालाई नागरिकता देउ भनेर श्रीमानलाई फकाउँदै छु।’
दिप्ती गुरुङले आफ्ना दुई छोरीलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउन कम्ती दुःख गरेकी छैनन्। छोरीहरू ठुला भइसके उनीहरूले पाउने छात्रावित्तृदेखि अन्य धेरै अवसरहरू नागरिकता नभएकै कारण गुमाइसके। तर, दिप्तीले उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन सकेकी छैनन्। भन्छिन्, ‘मैले मेरा छोरीलाई नागरिकता दिलाउन कि त उनीहरूको बाबु बेपत्ता भएको भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ कित म ‘चरित्रहिन’ हुँ भनेर राज्यलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर मैले जन्माएका छोरीलाई मैले नागरिकता दिलाउन किन नपाउने?’
छोरा २ वर्षको हुँदा शर्मिला थापाको श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद भयो। अहिले छोरा १३ वर्षको भयो। एक्लै छोरो हुर्काउन र पढाउन उनले कम्ती दुःख गरिनन्। उनी भन्छिन्, ‘सम्बन्ध विच्छेद भएपनि म उसँग झगडै गरेर छोरालाई नागरिकता दिलाउन सक्छु तर, मैले मेरो छोरालाई एक्लै हुर्काउन यति दुःख गरें भने उसलाई नागरिकता पनि मेरै नामबाट दिलाउन पाउनुपर्छ।’ शर्मिला भन्छिन, ‘छोराले पनि मामु कै नाममा नागरिकता लिन्छु भन्छ।’
छोरालाई नागरिकता दिन नसकेकी महोत्तरीकी रमा विष्टको पीडा पनि उस्तै छ। ‘छोरा पढाउन काठमाडौंमा राखेकी छु तर, नागरिकता नहुँदा उसले एउटा सीमकार्ड समेत लिन सकेको छैन। वैंक खाता नहुँदा कलेजको पच्चीस सय फीस तिर्न म पाँच हजार खर्च गरेर आउनुपर्छ’ रमाले भनिन्।
उनले भारतीय नागरिकसँग विहे गरिन्। तर श्रीमान वेपत्ता छन्। श्रीमानको भारत कै नागरिकता पनि थिएन। आफ्नो श्रीमानको प्रमाणपत्र नहुँदा आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहेको उनले बताइन्। रमा भन्छिन, ‘४ वर्ष भयो नागरिकताका लागि प्रयास गरेको, छोराका सवै साथीले नागरिकता पाइसके, आफूले नपाउँदा उनीहरू निरास भएका छन्।’
‘अब म मेरा छोरालाई नागरिकता दिन कसलाई बाबु बनाउँ ? ‘बाबु खोज्न कहाँ जाउँ?’ उनी आक्रोस पोख्छिन्। मर्नै परेपनि आफ्ना छोरालाई नागरिकता दिलाएर छाड्ने अठोट उनले गरेकी छन्। छोराको नागरिकता नहुँदा आफ्नो सम्पत्ती छोरालाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदिन कि भन्ने चिन्ता छ उनलाई।
संविधानको मस्यौदामा आएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले १६ वर्षमुनिका १० लाख ३४ हजार बालबालिका राज्यविहिन हुने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्। यी मध्ये ९ लाख बालबालिका एकल आमासँग बस्दै आएका छन्।
संविधानको मस्यौदाको धारा १२ (क) ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था गरेपनि ‘र’ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने र यसले हजारौं वालवालिका राज्यविहिनताको जोखिममा पर्ने हुँदा आमा वा बाबु हुनुपर्ने आम महिलाको सुझाव छ।
२०६८ सालको जनगणनामा नेपालमा एकल आमा वा बाबुसँग बसिरहेका १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या १० लाख ३४ हजार १०८ छ। बाबुसँग ६६ हजार ६३८, आमा र बाबुबिना ४७ हजार ४७७ बालबालिका छन्। यहि प्रावधान सहित संविधानमा आएमा यी बालबालिकाले नागरिकता पाउन सक्दैनन्।
यसैगरि वंशजको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको टुङ्गो लागेको विषयमा ‘आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएका हकमा उनीहरूबाट जन्मेको सन्तान वालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्तावित प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था भन्दा पनि प्रतिगामी रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
यो व्यवस्थाले अव सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु र आमा दुबै चाहिने हुन्छ जसले झन जटिलता ल्याउने पुर्व सभासद सपना मल्ल प्रधान बताउँछिन्। यसअघि बाबुलेमात्रै सजिलै आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्थ्यो।
त्यसैले उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा आमा वा बाबु नेपाली रहेछ भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग महिलाको छ। ‘यो प्रावधानले धेरै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहिनताको जोखिममा पार्दछ,’ मल्लले भनिन्।
नागरिकतामा अहिले ल्याइएको प्रावधान अनुसार विदेशीसँग विहे गरेर उनीहरूको सन्तान नेपालमा जन्म्यो भनेमात्र नागरिकता पाउँछ। जवकी नेपाली विदेशमा यतिधेरै छन् चाहे खाडीमा होस या अन्य मुलुकमा उनीहरूले उतै विहे गरेर छोराछोरी पाए भने के ती नेपाली नागरिक हैनन् ? मल्लको प्रश्न छ, ‘जन्मको आधारमा नागरिकता नदिने भए अब उनीहरुले कहाँको नागरिकता लिन्छन्?
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष शर्मिला कार्की भन्छिन् ‘बलात्कारबाट जन्मिएका र बाबुले अस्वीकार गरेका वा पहिचान लिन नचाहेका र बाबु बेपत्ता भएका वा बाबु को हो भनेर जानकारी नै नभएका बालबालिकालाई आमाले आफ्नो पहिचान सहित नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’